Raha 300 andavanandro, nampitomboina ho 950 koa ireo polisy mpanangom-baovao. Efa manana angom-baovao marim-pototra ny polisin'ny UIR(Unité d’Intervention Rapide) mikasika ireo mpanendaka eny amin'ny faritra mafana. Efa miandry fotsiny izy ireny ka miditra an-tsehatra avy hatrany raha vao misy manao fihetsika hafahafa. Ny sabotsy lasa teo, jiolahy iray no lavon'ny polisy teny ambadiky ny FOP 67ha. Tamin’ny talata 7 mey tamin’ny 6ora30mn maraina, jiolahy 4 indray no tratran’ny UIR. Vao nahita ny polisy nanatona izy ireo izay saika hanendaka olona iray teny Andavamamba dia vaky nandositra ka raikitra ny fanenjehana. Tany Anatihazo Isotry vao tratra ny 3. Ny iray kosa tsy nanaiky ny hosamborina fa nitsoaka na dia efa najanon'ny polisy aza dia voatifitra ka maty. Natolotra ny fitsarana avy hatrany izy telo lahy ireo fa ny iray lavo efa naterina teny amin'ny tranom-paty.